प्रायः सोधिने प्रश्न - कोम
तपाईंलाई उत्तम मूल्य र अद्वितीय विश्वव्यापी शपिंग अनुभव प्रदान गर्न आदेशमा वैश्विक व्यापारी र ज्वेलरी कलाका साथ कडम पार्टनरहरू।
हाम्रो लक्ष्य तपाईंलाई उत्तम शिपिंग विकल्पहरू प्रदान गर्न हो, तपाईं जहाँसुकै बस्नुहुन्न। प्रत्येक दिन, हामी संसारका सयौं ग्राहकहरु लाई डेलिभर गर्छौं, यो सुनिश्चित गरेर कि हामी तपाईलाई सबै समयमा उत्तरदायीताको उच्च स्तर प्रदान गर्छौं।
हाल, हामी प्रस्ताव गर्छौं नि: शुल्क शिपिंग विश्वव्यापी on पुल हाम्रो स्टोर मा आईटमहरू।
हाम्रो कस्टम मुद्रित वस्तुहरू पठाइन्छ DHL एक्सप्रेस!
वितरण समय अनुमान: १०-१-10 दिन (DHL) गन्तव्य ट्र्याकिंगको साथ)
अमेरिका, बेलायत, CA, AUS डेलिभरी समय अनुमान: १२-२10 दिन (EMS) गन्तव्य ट्र्याकिंगको साथ)
कुनै पनि जुत्ता अर्डरहरू जुन processing 45 दिन भित्र आउँदैन। अर्डर प्रसंस्करणको ref XNUMX दिन भित्र रिफन्ड वा नि: शुल्क पुनःस्थापनाको लागि योग्य हुन्छ।
अमेरिकी अर्डरहरूको लागि ट्र्याकि numbers नम्बरहरू देखाउन days दिन सम्म लिन सक्दछ जब डाटा देखाउन ट्र्याकिंगको लागि अर्डर संसाधित भएपछि। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सहि ट्रयाकि number नम्बर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईं यसलाई ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ thekdom.com/pages/track-your-order
अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरहरूको लागि ट्र्याकि numbers नम्बरहरू देखाउन १० दिन सम्म लिन सक्दछ जब डाटा देखाउन ट्र्याकिंगको लागि अर्डर प्रशोधन भएपछि। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सहि ट्रयाकि number नम्बर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईं यसलाई ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ thekdom.com/pages/track-your-order। सुझाव दिनुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय आदेशहरू एक पटक पठाइएको र फिर्ती योग्य छैन र गन्तव्य वितरण डाटा देखाउँदैन।
हामी सबैमा काम गर्छौं बिक्री अन्तिम नीति हो। यसको मतलब यो हो कि तपाइँ रद्द गर्न, फिर्ता गर्न वा अर्डरको लागि फिर्ती प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म यो हाम्रो अन्तमा त्रुटि हुँदैन।
A: कृपया हामीलाई support@thekdom.com मा ईमेल गर्नुहोस् र हामीलाई समस्या के हो बताउनुहोस्! हामी तपाईसँग काम गर्नेछौं मुद्दा सच्याउनका लागि। कृपया याद गर्नुहोस्, यी अनुकूलन मुद्रित शर्टहरू हुन्, अर्डर गर्नका लागि। एकचोटि छापिएपछि हामी तिनीहरूलाई प्रिन्ट गर्न सक्दैनौं वा तिनीहरूलाई स्टकमा फर्काउन सक्दैनौं। त्यसो भए, हामी तपाईंको कार्यको साथमा सन्तुष्ट छौं भन्ने निश्चित गर्न केहि काम गर्न कोसिस गर्नेछौं!
Q: तपाईंले मेरो अर्डरमा गल्ती गर्नुभयो।
A: हामी धेरै माफी चाहन्छौं। यो प्रायः हुँदैन, तर कोही पनि पूर्ण हुँदैन। ईमेल समर्थन@thekdom.com र हामी योसँग काम गर्ने छौं यसलाई सहि बनाउनका लागि। प्राय: यसको आवश्यकता पर्दछ कि तपाईले हामीलाई गरेको त्रुटिको तस्वीर हामीलाई पठाउन आवश्यक पर्दछ त्यसैले हामी a) तपाईंको दावी प्रमाणित गर्न सक्नेछौं र b) तपाईंलाई सच्याउन कल गर्नुहोस्।
हामीसँग उत्पादनको ठूलो वर्गीकरण छ घरमा भण्डार गरिएको छैन। त्यसोभए, जब तपाईं एक पटकमा धेरै वस्तुहरू अर्डर गर्नुहुन्छ, तिनीहरू छुट्टै पठाइन्छन् ताकि तिनीहरू तपाईंलाई द्रुत रूपमा प्राप्त गर्न सक्दछन्। अर्कोको अगाडि तपाईले एउटा आईटम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले कृपया यदि तपाई आफ्ना सबै वस्तुहरू एकैचोटि प्राप्त गर्नुहुन्न भने कृपया नडराउनुहोस्, मात्र याद गर्नुहोस् कि तिनीहरू बाटोमा छन्!